YS-131NO / NC-S Nardị Electricdị ọkụ eletrik na ndị na-emepụta ihe na ndị na - eweta ya - YLI ELECTRONICï¼ˆASIAï¼ ‰ LTD
Ulo > > Mkpọchi eletrik > YS-131NO / NC-S Warara-ụdị Electric Strike na mgbaàmà
Ọkụ eletriki bụ ngwa njikwa nnweta eji abanye ọnụ ụzọ. YS-131NO / NC ụdị dị mkpụmkpụ ihu. Ọkụ eletrik a nwere mmepụta mgbaàmà. A na-ahụkarị ọkụ eletrik n'ụdị abụọ: Enweghi nchebe: na ugbu a na iku ahụ ga-eme ka ọ kpọghee. Fail-safe: na ugbu a na iku ga-eme ka ọ kpọchie.
Nlereanya:YS-131NO / NC-S
Njirimara Fail Secure (YS-131NO-S); Ada Ada (YS-131NC-S)
Tags na-ekpo ọkụ: YS-131NO / NC-S Warara-ụdị Electric Strike With Signal, Manufacturers, Suppliers, Factory, ngwaahia, Bulk, Free Sample, China, Mere na China, Ego, Buy discount, Price, Price List, Quotation, CE, ISO9001, Ogo